Ciidamada Jabuuti Oo Lagu Weeraray Gobalka Hiiraan. – Bogga Calamada.com
February 27, 2017 6:30 am Views: 8
Ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa habeenkii xalay dagaal culus ku qaaday saldhigyada iyo difaacyada ciidamada dowlada Ridada Jabuuti ay ka sameysteen mid ka mid ah degmooyinka gobalka Hiiraan.
Dagaalka waxa uu sigaar ah kaga dhacay degmada Jalalaqsi ee gobalka Hiiraan’iyadoona dagaalka la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan kaasi oo dhawaaqiisa si aad ah looga maqlayay degmooyin iyo deegaano ka tirsan gobalka Hiiraan.
Ciidamada Jabuuti ayaa gabi ahaan saaka aroortii hawada ka saaray isgaarsiinta degmada walow saacado kadib ay dib u fasaxeen isgaarsiinta degmada taasi oo muujineysa iney jirto khasaara nafeet iyo mid hantiyadeed oo ciidamada Ridada Jabuuti kasoo gaartay dagaalkaasi.
Degmooyinka Beledweyne,Buulo burte iyo Jalalaqsi oo ka wada tirsan gobalka Hiiraan ee bartamaha dalka Soomaaliya waxaa duulaan ku jooga ciidamo Jabuutiyaan ah kuwaasi oo xilli walbo weeraro kala kulma dhanka Ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin.